ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အား သွားရောက်တွေ့ဆုံ | Pyithu Hluttaw
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E. Mr. Nguyen Phu Trong အား စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ ညနေ ၁၇၀၀ နာရီချိန်တွင် ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုဌာနချုပ်သို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် မိမိတို့နှစ်နိုင်ငံသည် မိတ်ဆွေကောင်းများဖြစ်ကြပြီး သမိုင်း အစဉ်အလာ ကြီးခဲ့ကြောင်း၊ တူညီသောကဏ္ဍအများအပြားရှိနေပြီးတစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ အပြန်အလှန် အကူအညီ ပေးခဲ့ကြကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးစနစ် မည်သို့ပင် ပြောင်းစေကာမူ မိမိတို့ နှစ်နိုင်ငံ ကဏ္ဍအားလုံးတို့၌ ဆက်ဆံ ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဆက်လက် တိုးမြှင့်သွားရန်လိုပါကြောင်း၊ ပါတီနှစ်ရပ် ပိုမိုရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းဖြင့် ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကနှင့်အတူ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသား လွှတ်တော်တို့မှ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများဖြစ်ကြသော ဦးသိန်းဇော်၊ ဦးလှမြင့်ဦး၊ ဦးဋ္ဌေးမြင့်၊ ဒေါက်တာခင်ရွှေ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ဦးဝင်းလှိုင် နှင့် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြပြီး ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E. Mr. Nguyen Phu Trong နှင့်အတူ ဗီယက်နမ်- မြန်မာချစ်ကြည်ရေး အသင်းဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Nguyen Manh Tien ၊ ဗဟိုကွန်မြူနစ်ပါတီမှ ဖိတ်ကြားထားသောအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြသည်။